रोल्पादेखि दाङ आउँदै गरेको स्कार्पियो दूर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु,२ जना गम्भीर घाइते – Sidha Patra
रोल्पादेखि दाङ आउँदै गरेको स्कार्पियो दूर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु,२ जना गम्भीर घाइते
Sidha Patra बुधबार, बैशाख २२, २०७८
दाङ । रोल्पाको लिबाङबाट दाङको घोराही तर्फ आउँदे गरेको स्कार्पियो दूर्घना हुँदा एक जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने थप दूई जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।
दूर्घटनामा मृत्यु हुनेमा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ का अन्दाजी ३४ बर्षीय बिष्णु गिरी रहेको दाङ जिल्ला प्रहरी प्रबक्ता डिएसपी मुकुन्दप्रशाद रिजालले बताए ।
उक्त दूर्घटनामा परि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ घर घोराही १७ मा बस्दै आएका ३५ बर्षीय राजकुमार थापा र तुलसीपुर १६ का २३ बर्षीय बशन्त भण्डारी गम्भीर घाइते भएका छन् । डिएसपी रिजालका अनुसार उनीहरुको राप्ती स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा उपचार भइरहेको छ । स्कार्पियो चालक गिरीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घोराही–कमेरेचौर सडक खण्ड अन्तरगत घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ ओइरेनीमा बुधवार बिहान ७ बजेतिर उक्त दूर्घटना भएको थियो । रोल्पाको लिवाङबाट दाङको घोराही तर्फ आउँदै गरेको बा १३ च ८०४८ नम्बरको स्कार्पियो सडकदेखि झन्डै ५ ÷ ६ सय मिटर तर खसेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै घाइतेलाई तत्कालै उद्धार गरि अस्पताल ल्याएपनि मृतकको शव अझैं घटनास्थलमै रहेको र त्यो शवपनि निकाल्ने प्रयास भइरहेको डिएसपी रिजालले जानकारी दिए । अहिले दुबै घाइते बोल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको हुँदा दूर्घटनाको कारण अझैं थाहाँ हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।